स्वदेशमै भएकाहरुले नदेखेका सडकका पिडामा प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको आँखा ! | Emedia Hub UK
Home News स्वदेशमै भएकाहरुले नदेखेका सडकका पिडामा प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको आँखा !
स्वदेशमै भएकाहरुले नदेखेका सडकका पिडामा प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको आँखा !
काठमाडौं । दोेलखाका रविन्द्र थामी विगत लामो समयदेखि मृगौला रोगी हुन् । सामान्य परिवारका रविन्द्र थामी लामो समयसम्म उपचार गराईरहनुपर्दा कहिले बाँच्ने आशा नै त्याग्छन् । त, कहिले थोरै बाँच्ने आशा बटुलेर कहिले रत्नपार्कको सडकमा आफ्नो उपचार खर्च बेहोर्नलाई बाध्य हुन्छन् । सायद ऊनी रत्नपार्कको सडकमा आफ्नो उपचार खर्च बचाउन भीख मागिरहँदा सडकमा हिड्ने धेरैले नाक खुम्च्याउने नै गर्छन्, । किनकी सडकमा आफ्नो जीवनगुजरा गर्नैका लागि र ? धेरै रविन्द्रहरु पनि त हुन्छन् ।
तर, केही कतिको भने, मन बिजाईहाल्छ र परैबाट भएपनि सकेको सहयोग गरेर ऊनीहरु आफ्नो बाटो लाग्छन् । एउटै देश, एउटै ठाउँ र एउटै परिवेशमा बस्ने तपाई, हामीको मन यी यस्ता परिघटनाले बिज्ला या नबिज्ला तर विदेशमा बस्ने नागरिकको भने मन छोएको छ । धेरै समय पनि भएको छैन, विदेशी भूमिमा बिन्दु थामीको शंकास्पद निधन भएको, त्यस बेला पनि यही समूहको पहलमा बिन्दु थामीको शव र केही क्षतिपूर्तिको रकम बिन्दुको आफन्त सम्म आईपुगेको थियो ।
त्यही समूह हो अहिले सडकमा आफ्नो जीवनको भीख मागिरहेका रविन्द्र थामीलाई पनि ४० हजार रकम सहयोग गरेका छन् । दोहा कतारमा रहेको नेपाल थामी समाज आप्रावासी समूहले रविन्द्र थामीलाई यो रकम सहयोग गरेको हो । उक्त रक मभने नेपाल थामी समाज, काठमाडौं ले रविन्द्र थामीलाई समक्ष पु¥याउने काम ग¥यो ।
थाहा छैन, सडकमा बसेर जीवन गुजारा गर्नेको जीवन कस्तो हुन्छ ? राज्यको शक्तिशाली अंगहरुले सडकमा बसेका यस्ता सबै रविन्द्रहरलाई कहिले पनि देख्दैन । विकसित र नमुना नगर, महानगर बनाउने नेताहरुले यी यस्ता रविन्द्रहरुलाई कहिले देख्ने ?अन्ततः विदेशी भूमिमा रगतपसिना बगाउन गएका यूवाहरु कै मन पालेको छ । उनीहरुले आफूले मेहेनत गरेको रकम कसैको जीवन बचाउन टेवा पुग्नेछ । यी यस्ता घटनाले विदेशमा गएका नेपालीहरुको मन स्वदेशमा भएको पिडा र वेदनामा छचल्किने गर्छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ ।
प्रचण्डको राजीनामा अन्योलमै !